चार दिनपछि आईजीपी खनालको अवकास : एआईजीको लागि चर्को भी,ड,न्त ! – " सुलभ खबर "
चार दिनपछि आईजीपी खनालको अवकास : एआईजीको लागि चर्को भी,ड,न्त !
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले माघ २८ गते ३० वर्षे सेवा अवधीका कारण नियमित अवकाश पाउँदैछन् । आईजीपी खनालसँगै ३ एआईजी र १८ जना डीआईजीले पनि एकैपटक अवकाश पाउँदैछन् । खनाल नेपाल प्रहरीका २६ औं आईजीपी हुन् ।खनालसँगै एआईजी पुष्कर कार्की, धिरु बस्न्यात र ठूले राई अवकाशमा जाँदैछन् ।
नेतृत्व विकास प्रणाली नहुँदा नेपाल प्रहरीमा फेरि डीआईजीबाटै आईजीपीमा बढुवा गरिने भएको छ । यसअघि दुईपटक एआईजीको अनुभव नभई २ जनालाई आईजीपी बनाउँदा समस्या देखिएको जनाउँदै फेरि पनि उही प्रक्रिया दोहोरिँदा संगठन कमजोर हुने भन्दै प्रहरी अधिकारीले चिन्ता जनाएका छन् ।
डीआईजीबाटै आईजीपी नियुक्त गर्दा डीआईजीमध्ये जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन÷परिचालन गर्नसक्ने हुनुपर्ने विषयलाई आधार मानिएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले प्रायः प्रहरी प्रमुख आफूअनुकुल व्यक्ति नियुक्त गर्दै आएको छ ।
खनालको अवकाशसँगै २७ औं प्रहरी प्रमुखका लागि पहिलाको जस्तो दौडधुप नरहेको प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतको भनाइ छ । कसले गर्लान् त झण्डै ८० हजार प्रहरीको नेतृत्व ? खनालकै वैकल्पिक टोलीका रुपमा भर्ना भएका ठाकुर ज्ञवाली भावी प्रहरी प्रमुखको प्रवल दाबेदार मानिएका छन् । हाल ज्ञवाली प्रदेश १ को प्रहरी प्रमुख हुन् ।ठाकुर ज्ञवाली
आईजीपीको दाबेदारका रूपमा डीआईजी ज्ञवालीको सम्भावना बढि देखिएको हो । ८ डीआईजीमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ र बरिष्ठ ज्ञवाली नै मानिन्छन् । तर, कसले बाजी मार्ला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । विवादरहित, इमान्दार संगठनप्रति बफादार भएकै कारणले पनि ज्ञवालीलाई भावी आईजीपीका रुपमा हेरिएको छ ।
डीआईजी बढुवामा ज्ञवाली भन्दा पछाडि परेका अर्का दावेदारका रुपमा रहेका विगतमा राजनीतिक हिसावले कांग्रेससँग निकट भई बेला–बेला विवादमा परेका तारणी लम्साल पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व हत्याउन शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । लम्साल दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् ।
यता आईजीपीको दौडमा सूर्य उपाध्याय भएपनि सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । ज्ञवाली, लम्साल र उपाध्याय २५ असार ०४७ मा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका हुन् । तीनमध्ये एक आईजीपी भएमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०७७ असार २४ मा सेवानिवृत हुनेछन् ।
डीआईजीहरू शैलेस थापा क्षत्री, हरि पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्की र विश्वराज पोखरेल जुनियर भएकाले २७ औं आईजीपीको प्रतिप्रर्धाको लागि उनीहरूको नाम चर्चामा छैन् ।एआईजीको लागि चर्को भी,ड,न्त !
खनालसँगै तीन एआईजीले अवकाश पाएसँगै रिक्त रहेको एआईजीको लागि चर्को भीडन्त हुने देखिएको छ । ज्ञवालीलाई आईजीपी नियुक्त गरिए उनीबाहेक तीनजना एआईजीको लागि दाबेदार हुन्छन् । एक जना आईजीपी भएपछि ज्ञवालीकै ब्याच दुई जना एआईजीका मुख्य दाबेदार हुनेछन् ।
डीआईजी तारिणी लम्साल र सुर्यप्रसाद उपाध्यायसहित अन्य डीआईजीहरुबीच रस्साकस्सी हुनेछ । बाँकी एक एआईजीको लागि चर्को भीडन्त हुनेछ । एआईजीको लागि प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्री, सीआईबी प्रमुख निरज शाही, प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख प्रधुम्न कार्की र विशेष ब्यूरो प्रमुख हरि पाल चर्को लबिङमा लागेको बताइन्छ ।
यता हालका महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले पनि एआईजीको लागि दावी गरिरहेका छन् । पोखरेल ८ डीआईमध्ये सबैभन्दा पछि बढुवा भएका हुन् । पोखरेल २७ औं आईजीपीपछिका २८ औं आईजीपीका प्रबल दाबेदार हुन् ।यसरी चयन गर्छ हुन्छन् आईजीपी
प्रहरी नियमावलीको परिच्छेद ४ को बढुवासम्बनधी व्यवस्थाको दफा ४१ मा उल्लेख भएअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात आईजीपी चयन हुने व्यवस्था छ ।जसमा उल्लेख भएअनुसार, ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र उनीहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा
आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’यद्यपी नियमावलीको अन्तमा यो पनि उल्लेख छ ‘नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’ ८ डीआइजीमध्ये जो कोहीलाई सरकारले आईजीपी बनाउनसक्ने अवस्था रहन्छ । तर सरकारका लागि ज्ञवाली नै उपयुक्त पात्र रहेको बुझिएको छ ।